Falanqaynta Khilaafka Iskeelka Baakadaha iyo Dhibaatooyinka Ka-hortagga Xannibista ee Lamination-ka aan Xalka lahayn
Nadiifinta aan xalka lahayn ayaa ku bislaatay suuqa, inta badan waxaa sabab u ah dadaallada baakadaha baakadaha iyo alaab-qeybiyeyaasha, gaar ahaan tikniyoolajiyadda saqafka aluminium ee dib-u-soo-celinta ayaa si weyn loo soo dhoweeyay, waxayna qaadatay tallaabo weyn oo hoos imaanaysa xaaladaha deegaanka ee beddelidda dareeraha-dhaqameedka- dahaadhka saldhigga ah iyo wax -soo -saaridda dahaarka. Shirkadaha baakadaha waxaa haleelay dhibaatooyin kala duwan oo tayo leh iyadoo ay ugu wacan tahay xaaladaha kala duwan ee alaabta ee qalabka, hawlgalka, alaabta ceyriinka ah, farsamada tayada leh iyo adeegsiga. Warqadani waxay ka hadli doontaa dhibaato jirta, oo ah, awoodda ay kiishku ku furmi karto iyo dabacsanaanteeda.
Tusaale ahaan, filim caag ah oo saddex-lakab ah oo laga soo saaray polyetylen wuxuu ka kooban yahay lakabka korona, lakabka shaqaynaya ee dhexe iyo lakabka shaambada kuleylka ee hoose. Caadi ahaan, waxyaabaha lagu daro oo furfuran oo siman ayaa lagu daraa lakabka kulul ee wax lagu xiro. Wax -ku -daridda macaan ayaa lagu wareejiyaa inta u dhaxaysa 3 lakab, furitaanka furitaankana ma aha.
Maaddaama ay tahay shaabad kulul, furitaanno iyo waxyaalo siman ayaa lagama maarmaan ah marka la soo saarayo isku-darka baakadaha dabacsan. Dhab ahaantii way kala duwan yihiin, laakiin inta badan soo saarayaasha baakadaha ayaa si khaldan u fahamsan inay isku mid yihiin.
Isku darka guud ee furitaanka waa silicon dioxide oo ganacsi ahaan la heli karo, kaas oo ah walax aan nooleyn oo kordhin karta iska caabbinta filimka ee u nuglaanta. Macaamiisha qaarkood waxay had iyo jeer ogaadaan in labada lakab ee kiishku u muuqdaan kuwo dhexdooda ka buuqsan, sida laba galaas oo is -dul saaran. Waxaad ogaan doontaa in ay tahay mid sahlan in la furo oo la tirtiro, taas oo sida caadiga ah ka maqan furitaanka lagu daro. Xataa qaar ka mid ah filim sameeyayaashu ma isticmaalaan.
Isku darka guud ee siman waa Erucic acid amide, kaas oo ah budada cad oo inta badan u hoggaansan rullaluuska dahaarka iyo rullalulaha hagaha ee geedi-socodka dahaarka-saldhigga. Haddii xad-dhaaf ah wakiil siman lagu daro inta lagu guda jiro geeddi-socodka dahaarka-bilaa-dareeraha ah, qaar baa u kala firdhi doona lakabka corona marka heer-kulka daaweyntu kordho, taasoo keenta in xooggii diirku yaraado. Filimkii asalka ahaa ee dahaadhka ahaa ee PE oo cad cad lagu diiriyey, waxaa lagu tirtiri karaa unug. Waxaa jira hab lagu falanqeeyo oo lagu tijaabiyo in xoogga diirka ee la dhimay ay saamayn ku yeelatay wax -ku -darrooyin siman, oo la gelinayo filimka laminate -ka ee xoogga hooseeya foornada 80 ℃ shan daqiiqo, ka dibna la tijaabinayo xoogga. Haddii ay si aad ah u kordhiso, waxaa asal ahaan la soo gabagabeeyey in hoos u dhaca xoogga qolofta ay sabab u tahay wakiil aad u siman.
Marka la barbardhigo dib-u-noqoshada dahaarka-saldhigga ah, habka dahaarka ee aan dareeraha lahayn ayaa aad ugu sahlan in la gaaro kala-wareejin lagu daro iyo kala-firdhin. Habka caadiga ah ee lagu xukumo dib-u-soo-kabashada xorta ah ee dareeraha ah waa in la hubiyo in ay yihiin kuwo is haysta oo hagaagsan si ay u oggolaadaan socod wanaagsan oo labaad oo wanaagsan oo ah xabagta aan dareeraha lahayn. Cadaadiska sare ee roogga filimku ku habboon yahay, ka sii siibidda badan waxay u badan tahay inuu u haajiro lakabka dahaarka leh, ama xitaa lakabka daabacaadda. Sidaa darteed, waxaan weli ku wareersannahay arrintan. Waxa aan sameyn karno ayaa ah inaan yareyno heerkulka dawaynta, hoos u dhigno culeyska dahaarka, dabciyo filimka, oo ku darto waxyaalo siman oo soo noqnoqonaya. Laakiin iyada oo aan si fiican loo kantaroolin, koollada way adag tahay in la daweeyo oo biyo ayaa haysata. Waxyaabo badan oo lagu daro ma saameynayaan oo kaliya xoogga diirka ee kiishka caagga ah, laakiin sidoo kale waxay saamayn ku yeelan doontaa wax-qabadkeeda kulul.
KANDA NEW MATERIALS waxay soo saartay dhejisyo taxane ah si loo xaliyo dhibaatooyinkaas. WD8117A / B laba qaybood oo ah koolada aan lahayn dareeraha waa talo fiican. Waxaa xaqiijiyey macaamiisha muddo dheer.
Iskuduwaha asalka ah ee isku dhaca
Iskuduwaha dahaarka ah ee khilaaf
WD8117A / B waxaa loo isticmaali karaa in lagu xalliyo dhibaatada xoogga diirka oo liita iyo waxqabadka shaabadaynta kuleylka oo ay ugu wacan tahay wax -ku -darka siman ee dusha sare iyada oo aan looga baahnayn soo -saaraha filimka asalka ah inuu yareeyo.
Intaa waxaa dheer, WD8117A/B waxay leedahay laba hanti oo kale:
1. Xoogga diirinta ee OPP / AL / PE wuxuu ka sarreeyaa 3.5 N, wuxuu u dhow yahay ama ka sarreeyaa qaar ka mid ah xabagta dhejiska saldhig u ah.
2. Daaweyn degdeg ah. Marka la eego xaaladaha la soo jeediyay, filimka dahaarka ahi wuxuu gaabin karaa muddada daaweynta ilaa 8 saacadood, taas oo si weyn kor ugu qaadaysa wax -soo -saarka.
Si loo soo koobo, go'aaminta kama -dambaysta ah ee isku -dheelitirka filimka isku -dhafka ah waa in lagu saleeyaa isku -duwayaasha is -khilaafsan ee u dhexeeya filimka iyo saxanka birta. Fikradaha khaldan ee ah in ay adag tahay in la furo boorso sababta oo ah ma jiraan ku -darid wax -ku -hagaajin ku filan waa in la aqoonsado oo la saxo. Waxaan kaliya ku guuleysan karnaa xasilloonida iyo alaabooyinka baakadaha dabacsan ee sarreeya iyada oo loo marayo soo koobitaan kasta iyo cusboonaysiin kasta.